ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံ ၅ဝဝ ေညာင္ပင္ႀကီး ရဲစခန္းတြင္ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခံ
ne win :
Su Myat ေနရပ္- Australia :
အမည္မေဖာ္လိုသူ ေနရပ္- Indianapolis :
..ZIMMO .... ေနရပ္- Yangon. :
ကို​ဇော်​ဇော်​အောင်​ ေနရပ္- ရန်​ကုန်​ :
ဒီ​လို​မျိုး​စည်း​စည်း​လုံး​လုံး​နဲ့​ ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့​ကြိုး​ပမ်း​သွား​ကြ​ရင်​ ဘယ်​လောက်​များ​ကောင်း​မ​လဲ။ အား​လုံး​ညီ​ညွှတ်​ကြ​မှ​ အ​ရာ​ရာ​အောင်​မြင်​မှာ။​ တ​ဖက်​က​လည်း​ မ​လို​အပ်​တဲ့​ကြေ​ငြာ​ချက်​တွေ​ထု​တ​ပြီး​ပြည်​သူ​ကို​ဘယ်​လောက်​ထိ​ညှင်း​ဆဲ​မ​လို့​လဲ​ဗျာ​ လူ​သား​ဆန်​တဲ့​အ​တွေး​မျိုး​ရှိ​ဖို့​ကောင်း​ပြီ။​ ကိုယ့်​ကို​ချုပ်​နှောင်​ထား​ရင်​ဘယ်​လို​နေ​မ​လဲ​ဗျာ​ စ​ဥ​စား​ကြည့်​ဖို့​ကောင်း​တယ်။​
I am really amazed and admire my people. Yes we should never give up and let them win. We have to show that we are strong and persistent and we will not let injustice get in the way. We are walking towards democracy and if this is what it takes let's continue fighting for it.